#OromoRevolution LABSII MUDDAMAA WAYYAANEEN BAAFTE LAAMSHESSUUF | Oromia Shall be Free
bilisummaa October 13, 2016	Comments Off on #OromoRevolution LABSII MUDDAMAA WAYYAANEEN BAAFTE LAAMSHESSUUF
3) Labsiin kun tarkaanfii itti aananii fudhachuu hedaniif haala mijeessuf kan godhameedha. Tarkaanfiin itti aanu haalli daran hammachaa yoo deeme sirnicha baraaruuf fonqolcha waraanaa (military coup) godhuudha. Kanas waraannifi dameen tikaa wal ta’uun hoggansa siyaasaa aangorraa buusanii ofii qabachuudha. Kana ammoo waan dhoksaan godhan osoo hin taane kanuma Tigroonni wal mari’atanii bilcheessanii jirani. Jeneraala tokko ol baasu, hogganoota siyaasaa fakkeessaaf aangorraa buusanii hidhu. Bifa kanaan haleellaa humnaa hamaa fudhachuun ummata jiilchanii of jalatti deebisuu yaadu.
Kuni qabsoo ummata keenyaatiif injifannoo guddaadha. Bu’a tarsiimoo isaatis ta’uun hubatamuu qaba. Diinaggee ishee laamshessuunifi caasaa bulchiinsa OPDO diigun sirnachi mataa irratti akka afaanfajaawu godhee jira. Labsiin kun ummata keenyarraa miidhaa amma dura hin jirre wanni fidu hin jiru. Waggaa 25 wayyaaneen humnaan malee seeraan hin bulchine. ‘Command Post’ har’a dhaabne jedhan kana Oromiyaa ittiin bulchuu kan eegalan ji’a Muddee 2015 irraa eegaleeti malee haaraa miti. Inumaatuu faaydaa qaba. Faaydaan tokko shira dhoksaan ummata keenya irratti raaw’ataa turan ifatti seera baasanii addunyaatti himuun qabsoo diplomaasii keenya ni gargaara. Kan lammaffaa labsiin kun invastarootaaf abdii kennee kan tasgabbeessuu osoo hin taane kan daranuu abdii kutacheesee biyyaa baasu waan taheef tarsiimoo diinaggee ishii laamshessuu san daran gargaara.
3) Sochii waraanni ishii godhu ugguruufi diinaggees daran haleeluuf dhiheessii boba’aa ( gaazaa) alaa galu kallattii hundaan hanqisii qabna. Bootteen jaraa alaa galaa Oromiyaa keessa darbe loltoota isaaniitiif gaaza guutuu dhoowwuu barbaachisa.
Kuni akkamitti hojiirraa oolaa, qabsaa’otaaf dhiifna. Waraanaa humnaan isin caalu kallattiin dura hin dhabbatinaa. Daguu fi riphuun irraa aanaa. Isaan qawween isin caalan, isin lafaafi ummata keessan isaanirra baaktan. Qorannoo gahaa godhaa, sirritti itti qophaayaa, gaaga’ama isinirra gahu hirdhisaa, balaa diina mudatu guddisaa.
Previous EU & the Human Rights Situation in Ethiopia-12 October 2016
Next Ololli Hogganoota fi Miseensota ABO irratti godhamaa jiru Qabsoo Oromoo fi Misensota Dhaabicha ni jabeessa malee hin laffisu.